Heshiis lagu gaarey in tareemmadu saacaddooda ku yimaadaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heshiis lagu gaarey in tareemmadu saacaddooda ku yimaadaan
La daabacay fredag 30 augusti 2013 kl 10.40
Hayadda maamulka gaadiidka (trafikverket) iyo qeybaha maamullada tareemmada ayaa si wada-jir ah maanta u galey heshiis qandaraas ah iiyo in tareemmadu ku yimmaadaan wakhtiyadii loo qoondeeyey, sida uu qoray war-geeyska DN.
Maamullada ayaa heshiis ku gaarey in aaney tareemmadu ka soo dib dhici karin wax ka badan shan daqiiqadood si loogu tiriyo iney wakhtiga ku yimaadeen. Heshiiskaasi ayaa hir-galkiisu bilaaban doonaa laga bilaabo koowda bisha septeembar, sida ay sheegtay hayadda gaadiidku.
Xeerarka iminka jira ayaa ogolaaneya in noocyada kala duwan ee tareemmadu ka soo dib dhici karaan wakhtigii loogu talo galey muddo 15 daqiiqadood gaarsiisan, iyada oo weliba oo loo qiimeeyneyo iney wakhtiga ku yimaadeen.
Fulinta heshiiskan iyo natiijada saacadaha ey tareemmadu ku yimaadeen ayaa lagu baahin doonaa isku celcelintooda bil walba qeybo ka mid ah xarmmaha waaweyn ee isteeshinnada tareemmada.